Maxay Talooyin Ku Daabacaan 'Instagram'? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Maxay yihiin dareenka Instagram?
October 30, 2020 0 comments 696
Hadaad ka mid tahay kuwa yaaban Maxay yihiin dareenka Instagram? halkan waxaad ka heli doontaa jawaabaha. Xusuusnow in dareenku yahay erey tilmaamaya tirada jeer ee kuwa raacsan ay galaan nuxurka daabacaad si ay u daawadaan.
Ma baraneysaa waxa ku soo jiidan kara barta Instagram?
Ogaansho dhammaystiran Waa maxay dareenka sheekooyinka Instagram, Waa lagama maarmaan in si qoto dheer looga fiirsado shaqooyinkooda, maadaama aysan ku saleysneyn oo keliya xisaabinta soo bandhigida iyo maamulka koontada Instagram, laakiin sidoo kale nidaamkan wuxuu daryeelaa dhinacyo badan oo muhiim ah, kuwaas oo ku habboon koontadaada 'Instagram' inay noqoto ugu caansan ee madal.
Sidaa darteed, kani waa aalad wanaagsan oo go'aamisa oo calaamadeysa waxa lagu daabacayo shabakadda bulshada ee Instagram, dabcan, waana muhiim in aqoon loo yeesho waxa dareenku yahay iyo sidoo kale sida loola socdo nidaamka la yiri, iyo xitaa in ka badan haddii Waxaad sameysaa qoraallo gaar ah si aad ugu dhawaaqdo nooc ka mid ah olole ama macluumaad kale oo dan u ah bulshada, taasoo ku abuuri karta saameyn togan bulshada.
Cabirku wuxuu horseedayaa falanqaynta xogta lagu dhawaaqayo, haddii ay jirto hawl wanaagsan oo ku saabsan daabacaadda nuxurka, sidoo kale, haddii dhibaato ka dhacdo daabacaaddaada, markaa waxaa loo tixgeliyaa inay tahay hab wanaagsan, si loo ogaado raacayaasha, xooga saar ilaha iyo dadaalada lagu hagaajinayo waxyaabaha aad daabacayso oo aad u wanaajineyso si guusha shabakadan bulshada ay ugu dhawaato calaacasha gacantaada.
Soojiidasho ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu falanqeeyo natiijooyinka ololeyaasha kale ee horay loo soo qabtay, markaa waa hab lagu ogaado kuwa natiijooyin fiican helay oo si fiican u shaqeeyay.
Arrinta la socoshada shabakadda bulshada ee 'Instagram', iyo falanqaynta cabbirka warbaahinta bulshada ee aad ku dhex isticmaasho, waa hab waxtar leh oo u adeegta hubinta iyo sixitaanka shey kasta oo carqaladeeya horumarka koontadaada, waxayna u horseedaa raadinta, sida ugu wanaagsan ee loo dalbado qaababka ku jira quudintaada ee ku jira shabakadda bulshada.
Noocyada tirakoobka Instagram
Instagram waa shabakad bulsheed oo leh astaamo badan oo gaar ah oo dammaanad qaadaya, oo ka dhalaneysa xaalad caan ah dadka isticmaala, sida in lala socodsiiyo, faa'iidooyinkeeda waxay siisaa dhowr nooc oo tirakoob ah oo gacan ka geysanaya sidii loo ogaan lahaa maareynta ku saabsan daabacaadaha, ka dib, waxaan tusnaa:
Tirakoobka sheekooyinka Instagram.
Tirakoobka guud ee guud.
Tirakoob faahfaahsan oo ku saabsan daabacaad kasta.
Si aad u daawato tirakoobka sheekooyinka Instagram, waxaa lagu helaa adigoo gujinaya sawirka astaanta waqtiga.
Kadib sawirka ama fiidiyaha la daabacay, ku dhaji adoo gujinaya dusha sare waxaadna arki kartaa tirada booqashooyinka ama kuwa raacsan, ka dib, ku dhaji adigoo gujinaya midig waxaadna yeelan doontaa tirakoobka guud.
Tirakoobka guud, oo ay soo saareen dadaallada ku jira koontada 'Instagram', ayaa ka muuqda astaanta, tan, tan soo socota waa in la sameeyaa:
Dhagsii saddexda xariiq ee kore.
Xullo ikhtiyaarka "Tirakoobka", dhammaan lambarrada waa la heli doonaa oo falanqeyn ayaa lagu sameyn karaa koontada Instagram.
Si loo dhameystiro tirakoobka daabacaad kasta, waad heli kartaa adiga oo gujinaya maqaal kasta oo aad rabto inaad falanqeyso, ka dib waxaad riixi kartaa "Arag tirakoobka", oo ku xigta ikhtiyaarka "Kobcinta", u rog dhinaca sare waana intaas. si loo xaqiijiyo tirakoobka boostada.
Fikradda dareenka Instagram, asal ahaan waxaa loola jeedaa nidaam gaar ah oo Instagram ah, kaas oo xajinaya tirinta aragtiyada uu sawir ama muuqaal ku yeelan karo astaanta isticmaaleha, sidoo kale, kuwa aan soo sheegnay, ayaa sidoo kale liis garaya tirada jeer isticmaalayaasha kale marin u helaan sheekooyinkaaga Instagram iyo fiidiyowyada tooska ah ee aad sameyso.
Shabakada bulshada ee 'Instagram', marka laga hadlayo in aragtiyaha ay dhaafsiisan yihiin gaadhista, waxay ka dhigan tahay booqashooyinka kuwa raacsan ama kuwa kale, inay daawanayaan waxa ku jira waxa la daabacay dhowr jeer, taasi waa, in isla isticmaalaha uu ilaalin karo nuxurka daabacaadda inta jeer ee aad rabto.
Daabacaaddu waa halbeeg ama tirakoob, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay tilmaame weyn maaddaama ay bixiso aragti ah caannimada waxyaabaha aad ku dhejiso barta Instagram. Sidaa darteed, waa ku habboon tahay in la ogaado Maxay yihiin dareenka Instagram? si loogu guuleysto shabakadan bulshada.
Sidoo kale shabakada bulshada ee Instagram, Baaxadda ayaa kuu furan adiga, waxay tixraaceysaa tirada isticmaaleyaasha "gaarka ah" ee la falgala waxyaabaha ka soo baxa daabacaadda. Ujeeddooyinkaan, ereyga "Mid gaar ah" macnaheedu waa isku dhafka taageerayaashaada iyo dadka u arka waxyaabaha ku jira danaha guud ee boggaaga, si kastaba ha noqotee, gaaritaanku badanaa wuu ka sii sarreeyaa haddii quudinta aad ku leedahay Instagram ay tahay mid guud.
Waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in haddii gaaritaanku uu bilaabmayo inuu yaraado, waxay ka dhigan tahay in xeelado ka wanaagsan ay tahay in lagu dabaqo daabacaadda nuxurka. Waxaa lagu gaari karaa iyadoo la fiirsado lana ogaado tartanka, waxaa lagugula talinayaa inaad si joogto ah iyo qaabab ugub ah ugu dhajiso dhagaystayaasha firfircoon kuna mashquuliya quudintaada sida sheekooyinkaaga.
Tabaha Caawinta Istaraatiijiyadda Daabacaadda
Waa kuwan talo soo jeedinno kaa caawin kara inaad daabacdo waxyaabaha ku jira:
Tijaabo: Sii codsiyo kala duwan oo lagu daabaco sheekooyinka.
Adeegso howlaha la heli karo: Instagram waxay leedahay qalab kala duwan, taas oo kuu oggolaan doonta inaad ogaato danaha kuwa raacsan, iyaga waxaa ka mid ah sahanno, kuwa aan soo sheegnay oo ah aalad aasaasi ah oo lagu helo macluumaad ku filan oo lagu soo jiidan karo kuwa raacsan cusub.
Ku dhaji tayada iyo fiidiyowyada soo jiidashada leh: Kuwa raacaya waxay jecel yihiin inay daawadaan fiidiyowyo ay ku jiraan waxyaabo filim ah.
Ogaanshaha waxa dareenku ku jiro Instagram waxay qaadataa heer sare oo caan ah iyo muhiimadda shabakadda bulshada la yiri, sidaas darteed tixgelinta kor ku xusan waxay kaa caawineysaa inaad kasbato kuwa raacsan si ay ugu faafiyaan quudintaada. Shabakaddan bulsheed, waxaa sidoo kale jira tilmaamayaal kale oo keena natiijooyin tirakoob, sida:
Xiga: Waa tirada jeer ee qofku uu riixay midigta fog ee shaashadda, si uu u daawado sheekada xigta. Natiijadani waxay oran kartaa in isticmaaleyaashu ay iska indha tirayaan sheekadaada sababtoo ah majeclaan ama, haddii taasi ay dhacdo, ma aysan dhammayn akhrintiisa.
Gadaal: Waxaa loola jeedaa tirada jeer ee uu qofku riixay dhanka bidix ee shaashadda si uu ugu soo laabto daawashada sheekadii hore. Tirakoobkani wuxuu keenaa natiijo wax ku ool ah si loo go'aamiyo in waxyaabaha ku jira ay muhiim u yihiin kuwa raacsan; Markaad u kuur galeyso in waxa ku jira daabacaaddu ay leeyihiin "Dib" badan, waxaa lagugula talinayaa inaad dhowr jeer daabacdo daabacaadda noocan ah.
Sheekada xigta iyo ka-tagida: Waa tirada jeer ee kuwa raacsan ay ku riixaan sheekadaada qalabkooda ka dibna ay aadaan koontada xigta. Joojinta ayaa sidoo kale tixraacaysa tirada jeer ee aan soo sheegnay ay ku cadaadiyeen badhanka la kansalo aaladooda si ay u joojiyaan aragida sheekadaada; Ka bixitaanku waxay sidoo kale u adeegi karaan inay cadeeyaan in kuwa raacsan ay ka xanaaqsan yihiin nuxurka, in, si la mid ah, ay ka dhammaadeen waqtiga si ay u daawadaan sheekooyinka oo dhan, ama laga yaabee inay u foorarsadeen dhinaca sare si ay u akhriyaan macluumaadka jira la wadaago.
Waxaas oo dhan ayaan ku ogaanay waa maxay dareenka Instagram, iyo inay yihiin qalab cajiib ah oo lagu cabbiro dhagaystayaashaada.
Qiyaasaha warbaahinta bulshada ee barta 'Instagram'
Soojiidasho iyo gaaritaan waa cabirro kuu oggolaanaya inaad gasho koontada Instagram si aad u hubiso tirakoobka booqashooyinka shabakadda bulshada.
Ahmiyada ay leedahay cabbirada warbaahinta bulshada
Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee shabakadda bulshada waxaa ka mid ah in la kordhiyo tirada dadka raacsan, dareenka iyo gaaritaanka ay sheekadaadu ku leedahay sida aad ugu quudiso barta 'Instagram', sidoo kale kuwani waa xubno tilmaamaya, haddii ay ka kooban yihiin daabacadaha la sameynayo. Waxay u soo rogayaan qaab sax ah, marka lagu daro, waxay noo oggolaadeen inaan xisaabino heerka caannimada aad ku leedahay barta Instagram.
Waa in la ogaadaa in looguma talagalin oo keliya in lagu muujiyo macluumaadka ku saabsan kaqeybgalka isticmaaleyaasha horeyba u raacay koonto, laakiin sidoo kale in la muujiyo tirada dadka raacsan ee adeegsadayaasha awood u yeeshay inay daawadaan daabacaadda.
Sidoo kale, dareenka ka dhalan kara bartaada 'Instagram' ama sheekadaadu waxay leedahay muhiimad weyn, taasina waa inay bixiyaan taageero lagu cabbirayo saameynta bulshada ee daabacadahaadu ay ku leeyihiin dadka isticmaala shabakadda bulshada ee 'Instagram'.
Haddii aad ka heshay qoraalkan mid xiiso leh oo ku saabsan ¿Maxay yihiin dareenka Instagram?, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso maqaalkeena: Sida loo saxarro sawirrada barta 'Instagram' wixii ku habboon?.
1 Ma baraneysaa waxa ku soo jiidan kara barta Instagram?
1.1 Noocyada tirakoobka Instagram
1.2.1 Tabaha Caawinta Istaraatiijiyadda Daabacaadda
2 Qiyaasaha warbaahinta bulshada ee barta 'Instagram'
2.1 Ahmiyada ay leedahay cabbirada warbaahinta bulshada
Sidee loo ogaadaa cidda qabsatay qof kale Instagram?